प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा रमेश पाण्डे, सचिवमा कँडेल ! « MNTVONLINE.COM
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा रमेश पाण्डे, सचिवमा कँडेल !
नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रवासी शुभेच्छुक संस्था प्रवासी नेपाली एकता मञ्चले पूर्णता पाएको छ । करिब एक वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि अष्ट्रेलियामा रमेश पाण्डे अध्यक्ष चयन भएका छन् भने प्रवीण कँडेललाई सचिव बनाइएको छ । यस बाहेकका पदाधिकारी सबैलाई कार्यकारी सदस्य भनिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र एनेकपा माओवादीबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना विभिन्न जनवर्गीय संगठन र शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई समेत एकताबद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई पार्टीबीच कसको नेतृत्व कहाँ हुने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा लामो समय यत्तिकै अनिर्णयको अवस्था थियो । नेकपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवास कमिटीका अध्यक्ष युवराज चौलागाईंको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यी निर्णय गरेको र एकताबद्ध भएर प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको सुखदुखको सारथी बनी अघि बढ्न प्रवासी नेपाली एकता मञ्चहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
अष्ट्रेलियामा पाण्डे अध्यक्ष
अध्यक्ष पदमा दुबै संगठनले दावी गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि दुबै पार्टीको प्रवासी संगठनका दुई दुई जनालाई अध्यक्ष र सचिव पदमा पठाइएको थियो । यीमध्येबाट अष्ट्रेलियाको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको अध्यक्षमा रमेश पाण्डे चयन भएका हुन् । पाण्डे तत्कालीन प्रवासी नेपाली मञ्चका अध्यक्ष नै थिए । यस्तै सचिवमा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका प्रवीण कँडेललाई चयन गरिएको छ भने सदस्यहरुमा रामशरण रानाभाट, रमेश पौडेल, केशव जोशी, अच्युत थपलिया, राम घिमिरे, प्रकाश पन्थी, ध्रुव सुवेदी, हरिलाल लामिछाने, सिके भुसाल, गोमा मैनाली, दिपक पहारी, भुवनहरि पाण्डे, प्रकाश सेढाई, मधु पन्थी, राजु उपाध्याय, बालगोपाल उपाध्याय, तोयानाथ अर्याल रहेको छन् । यस्तै कार्यसमितिका सदस्यहरुमै मनऋषि धिताल, माण्डवराज कार्की, निराजन गौली, प्रकाश अधिकारी, लोकराज पौडेल, कृष्ण पौडेल, कपिल पाण्डे, भरत नेपाल, हिमलाल गैरे, ईश्वर पौडेल, दिपक पाण्डे, यादव देवकोटा, धर्म अधिकारी, विएन मण्डल, यादव बस्याल र झलक ढुंगाना रहेका छन् ।
एमएनटीभीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष रमेश पाण्डेले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली समूदायको सेवामा सदैव झैं खटिने बताए । “प्रवासमा हामीले स्वयंसेवी रुपमा एकअर्काको सुख दु:खमा साथ दिनुपर्छ, यही नै हाम्रो उद्देश्य हो । साथै, हामी दुई संगठन एक भइसकेको हुनाले आगामी दिनमा अझ बढी सक्रियताका साथ सबैलाई आफ्नोपनको महसूस गराउँदै अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ ।”
यस्तो छ अन्य देशहरुको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यसमिति >>>> Click Here Prabas circular final 1